Afrin vs. Flonase: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri - Zvinodhaka Vs. Shamwari | Chikunguru 2021
Wellness Dzidzo Yehutano Nharaunda Hutano Dzidzo, Nhau Info Info, Hutano Dzidzo Checkout Kambani, Hutano Dzidzo Zvipfuwo Nhau, Wellness Dhinda Nharaunda, Wellness Hutano Dzidzo, Hutano Nharaunda, Kambani Kambani Nhau
Kuru >> Zvinodhaka Vs. Shamwari >> Afrin vs. Flonase: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Afrin vs. Flonase: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Kuzara kwemhino kunoitika kana tsinga dzeropa uye zvinyama zvakakomberedza zvepassage zvinokundwa neyakawandisa mvura. Izvi zvinogadzira iko kwakazara kana kwakabikwa kunzwa mumhino, izvo zvinogona kuita kuti zvive zvakaoma kufema. Kuzara kwemhino kunogona kuperekedzwa nemhino inomhanya, kuhotsira, kukosora, kana kutemwa nemusoro.
Afrin (oxymetazoline) uye Flonase (fluticasone propionate) mapiritsi ega ega anogona kupa zororo rezviratidzo zvine chekuita nekusangana mumhuno. Kunyangwe iwo ari maviri mapfapfira emumhino, mashandiro avanobvisa kuzara akasiyana zvakanyanya.
Ndeapi misiyano mikuru pakati peAfrin naFlonase?
Chinhu chinoshanda muAfrin, oxymetazoline, ndeye alpha-adrenergic agonist. Kana ichishandiswa mumusoro mumhino dzemhino, ndeye vasoconstrictor. Izvi zvinoguma nekuderera kwemvura inoyerera ichipinda uye munyama uye neropa nzira yemumhuno, pamwe nekuvhurwa kwenzira yemhepo.
Afrin inoshanda mune mashoma semaminetsi gumi, uye mhedzisiro yayo inogona kutora kusvika maawa gumi nemaviri. Kunyangwe iri decongestant inoshanda kwazvo, pane humbowo hwekuti inogona kukonzeresa kuzara pakashandiswa kweanopfuura mazuva matatu. Naizvozvo, kushandiswa kwenguva refu hakukurudzirwe. Afrin inowanikwa mumhando dzakasiyana siyana dzemasipiresi mhinduro ine 0.05% oxymetazoline. Kune 15 ml uye 30 ml pasuru saizi inowanikwa. Afrin inowanikwa pamusoro peiyo-the-counter (OTC) isina mushonga. Afrin haina kuratidzwa kune vana vari pasi pemakore matanhatu ekuberekwa, pamwe nevakuru.
Flonase, fluticasone propionate, inonzi corticosteroid. Kana corticosteroids ikaiswa mumusoro mumhino, dzinoratidza antipruritic, anti-inflammatory, uye vasoconstrictive zvivakwa. Corticosteroids inokonzera peptides inozivikanwa se lipocortins, iyo inoderedza kuumbwa uye kuburitswa kwevanomiririra vamiririri. Mhedzisiro yeFlonase inovaka nguva yakawandisa mushure mekushandisa zvisina tsarukano, uye nekudaro zvinogona kutora mazuva akati wandei kana vhiki kuti uone kubatsirwa kwakazara kweFlonase. Flonase inowanikwa seyakanyorwa uye pamusoro peiyo-counter. Semushonga, ibhodhoro remumhino rine mapiritsi zana nemakumi matanhatu. Iyo yepamusoro-the-counter vhezheni inowanikwa se60 pfapfaidzo kana makumi maviri emabhodhoro ekupfira. Flonase inogona kushandiswa muvana vane makore mana ekuberekwa kana kupfuura, pamwe nevakuru.
Misiyano mikuru pakati peAfrin neFlonase
Kirasi yemishonga Alpha-adrenergic agonist Corticosteroid
Brand / generic chinzvimbo Brand uye generic inowanikwa Brand uye generic inowanikwa
Chii chinonzi generic zita? Oxymetazoline Fluticasone propionate
Ndeapi mafomu (s) ayo mushonga unouya? Nasal pfapfaidzo Nasal pfapfaidzo
Ndeipi muyero wakajairwa? Mapiritsi maviri kusvika matatu mumhino yega yega maawa gumi nemaviri Imwe kana maviri mapiritsi mumhino imwe neimwe zuva nezuva
Inguva yakareba sei kurapwa kwacho? Mazuva matatu kusvika mashanu Mazuva akati wandei kusvika kumwedzi
Ndiani anowanzoshandisa mushonga? Vakuru, Vana vane makore matanhatu ekuberekwa kana kupfuura Vakuru, Vana vane makore mana ekuberekwa kana kupfuura
Mamiriro ezvinhu anorapwa naAfrin vs. Flonase
Afrin inoratidzirwa kurapa kuzara kwemhuno. Iyo inoshandiswa isiri-chitaridzi yekukonzera vasoconstriction mumatanho maitiro. Afrin haina mhedzisiro yakanangana neanomiririra kana eergiki midhiyamu, izvo zvinogona kutungamira kune sinus kuzara.
Flonase mushonga unoratidzwa kuti ubate allergic uye nonallergic (perennial) rhinitis. Iyo yeku-the-counter chigadzirwa chakanyorwa kurapa yekumusoro yekufema allergy zviratidzo zvine chekuita nehave fever kana allergic rhinitis. Zviratidzo izvi zvinosanganisira mhino dzakazara, kusemura, mhino inomhanya, kuyerera mhino, uye kuchenesa, maziso emvura. Iyo chete ndiyo inopfuura-the-counter nasal spray iyo inotakura chiratidzo cheizvi zvese izvi zviratidzo.
Mamiriro Afrin Flonase
Sinus kuzara Ehe Ehe
Vasoconstriction yenzira dzemhino Kunze-chitaridzi Kwete
Allergic rhinitis Kwete Ehe
Nonallergic rhinitis Kwete Ehe
Kumusoro mweya wekufema zviratidzo Kwete Ehe
Afrin kana Flonase inoshanda zvakanyanya here?
Afrin kutanga kwechiito maminetsi gumi, izvo zvinopa varwere nekukurumidza kupora kweanal zviratidzo. Nehurombo, zvinongokurudzirwa chete kushandisa pfupi pfupi: mazuva matatu kana mashoma. Mhedzisiro yeFlonase inogona kunge isinga zadzikiswe kwevhiki kana kupfuura, asi zvakachengeteka kushandiswa kwenguva refu. Flonase inoratidzwa zvakare kuti inobata zvinopfuura kusanganisa kwemhuno. Inoderedza akawanda zviratidzo zveiyo eganiki mhinduro, kusanganisira inomhanya mhino, kuhotsira, uye kuchenesa maziso. Afrin haina mhedzisiro pane izvi zvinogadziriswa mhinduro.
Imwe yedzidzo yakatarisa iko panguva imwe chete kushandiswa kwe oxymetazoline uye fluticasone kuona kana vaigona kuwedzera mhinduro yeumwe neumwe pakusangana. Yakaenzanisa mapoka matatu ekurapa: placebo, oxymetazoline chete, uye fluticasone ine oxymetazoline. Muchidzidzo ichi, oxymetazoline yaishandiswa kwenguva yakareba kudarika nguva yakakurudzirwa yemazuva matatu. Nasal mweya vhoriyamu yaive yakakwira zvakanyanya muboka vachishandisa zvese oxymetazoline uye fluticasone. Izvo zvakare zvakaonekwa kuti kudzokedzana kuzara kwakange kusipo, zvichiratidza kuti mhedzisiro ne oxymetazoline yega inofanira kuongororwa zvakanyanya. Mubatsiri wako wehutano anogona kubatsira kuona kuti ndezvipi zvigadzirwa zvakakunakira iwe.
Kuvhara uye kuenzanisa kwemutengo weAfrin vs.Flonase
Afrin haiwanzo kuvharwa neinishuwarenzi nekuti hachisi chigadzirwa chemushonga. Izvi ndezvechokwadi kune ese ari maviri Medicare uye zvirongwa zvekutengesa. Mutengo wekutengesa we 15 ml bhodhoro unogona kunge wakakwira kunge ungangoita madhora gumi nerimwe. Chiremba wako anogona kuburitsa tsamba yeAfrin, uye neka SingleCare koponi, unogona kuwana iyo generic vhezheni yakaderera se $ 5.11.
Flonase, kana yayo generic, inowanzo kuvharwa nekutengesa uye Medicare madhiragi emushonga. Mutengo wekutengesa weFlonase mubhodhoro rine mapiritsi zana nemakumi maviri anokwanisa kunge anosvika madhora makumi maviri nemasere asi nekoponi, varwere vanogona kubhadhara zvishoma seUS $ 11- $ 12 nemushonga.
Kazhinji yakafukidzwa neinishuwarenzi? Kwete Ehe
Inowanzo kufukidzwa neMedare? Kwete Ehe
Standard muyero 15 ml bhodhoro 16 g bhodhoro
Chaizvoizvo Medicare copay n / a Zvinosiyana, asi kazhinji zviri pasi pe $ 10
SingleCare mutengo $ 5- $ 14 $ 11- $ 32
Zvakajairika mhedzisiro yeAfrin vs. Flonase
Afrin inozivikanwa kuti inokonzeresa kwenguva pfupi, yemuno kutsamwa kumumhino mucosa, uye izvi zvinogona kukosvora kusema. Izvi zvinofanirwa kupfuura mukati memaminetsi mashoma ehutongi. Kana Afrin inoshandiswa kweanopfuura mazuva matatu, varwere vanogona kusangana nekudzokedzana kuzhinji. Ichi chiitiko, chinozivikanwawo se rhinitis medicamentosa, inofungidzirwa kuti inokonzereswa apo vasoconstriction inokonzereswa naAfrin icheka kubvisa ropa kumatunhu emuno. Izvi zvinotungamira kuzvimba uye kuzvimba. Kunzwa kwekusangana kwakadzokedzana kunonzi kunonzwa zvakanyanya kudarika iko kuzara kwekutanga Afrin yairapa.
Flonase ine chiitiko chakakwirisa chemusoro wemusoro nezvakawanda se 16% yevarwere uchirwadziwa nemusoro mushure mekutungamira kwaFlonase. Chimwe chinowanzoitika mhedzisiro mhedzisiro kubuda ropa kana mhino.
sei kubvisa perioral dermatitis kumeso
Ose Afrin naFlonase anogona kukonzera kutsamwa kwenzvimbo yemumhino mucosa.
Iyi inotevera chati haina kuitirwa kuti ive runyorwa ruzere rwezvinogona kuitika mhedzisiro. Ndokumbirawo ubvunze chiremba wako kana wemishonga kuti uwane rondedzero yezvose zvingave mhedzisiro.
Kutemwa nemusoro Kwete n / a Ehe 4% -16%
Dzungu Kwete n / a Ehe 1% -3%
Nausea / Kusvipa Kwete n / a Ehe 3% -5%
Kunetseka kwenzvimbo Ehe Hazvina kutsanangurwa Ehe 4% -6%
Yakawedzera intraocular kumanikidza Kwete n / a Ehe 1% -3%
Epistaxis Kwete n / a Ehe 6% -12%
Nasal mucosal ulcer Kwete n / a Ehe 3% -8%
Nasopharyngitis Kwete n / a Ehe 8%
Yakanyanya sinusitis Kwete n / a Ehe 5%
Ropa mumhino mucosa Kwete n / a Ehe 1% -3%
Mhuno yakaoma Ehe Hazvina kutsanangurwa Ehe 1% -3%
Kudzoka kumhino yemhino Ehe Hazvina kutsanangurwa Kwete n / a
Huro inorwadza Kwete n / a Ehe 1% -3%
Kunobva: Afrin ( Zuva Nezuva Flonase ( Zuva Nezuva ).
ko kana iwe ukatora hurongwa b mushure maawa makumi manomwe nemaviri
Kubatana kwezvinodhaka zveAfrin neFlonase
Kunyangwe ese ari maviri Afrin naFlonase aine mhedzisiro yemunoitika kwaanoiswa mumusoro mumhino, kune mimwe mimwe mishonga inogona kusangana navo.
Ergot zvigadzirwa kirasi yemishonga inogona kushandiswa kurapa migraines. Migranal is a nasal spray ergot derivative iyo inoshanda nekukonzeresa chiratidzo chevasoconstriction. Iko kushandiswa panguva imwe chete kweAfrin, iyo zvakare inokonzeresa vasoconstriction, kwaizokonzeresa kuwandisa kwakanyanya kwevasoconstriction. Iko kusanganisa kunofanirwa kudzivirirwa.
Esketamine is antidipressant nasal chigadzirwa chinotarisirwa kamwe kana kaviri pasvondo. Ose Afrin naFlonase anogona kudzora mhedzisiro yesketamine. Kana chirevo chemumhino chakakosha pane esketamine dosing zuva, iyo yekumisikidza yemhino inofanirwa kupihwa kweinenge awa imwe pamberi pe esketamine.
Iyi tafura inotevera haina kuitirwa kuti ive izere runyorwa rweanogona kusangana madhiragi. Ndokumbirawo ubvunze chiremba wako wezvekurwara kuti uwane yakazara runyorwa.
Zvinodhaka Kirasi Yezvinodhaka Afrin Flonase
Atomoxetine Norepinephrine reuptake inhibitor Ehe Kwete
Cannabis Cannabinoids Ehe Kwete
Desmopressin Vasopressin analogineni Kwete Ehe
Ergotamine Ergot zvigadzirwa Ehe Kwete
Tiza Anopikisa weNMDA Ehe Ehe
Fentanyl (nasal serum) Opioid Ehe Kwete
Tedizolid Mishonga inorwisa mabhakitiriya Ehe Kwete
Doxepin Tricyclic antidepressants Ehe Kwete
Yambiro yeAfrin vs. Flonase
Afrin inongotarisirwa kushandiswa mukuwedzera kwekuwedzera kwemaawa gumi nemaviri kwete kwemazuva matatu. Kushandiswa kwechigadzirwa ichi chero kwenguva yakareba kupfuura zvinokurudzirwa kunogona kukonzera kunyongana kwakanyanya. Afrin inogona kukonzera kusagadzikana kwenguva pfupi sekurumwa, kuchenesa, kana kupisa munzira yemhino.
Flonase inogona kunonoka kupora mushure mekuita mhino kana kuvhiyiwa uye haifanire kushandiswa kusvikira wagamuchirwa nachiremba wako. Kana iwe ukatora systemic steroid kana immunosuppressant zvinodhaka, senge mishonga yeHIV, taura nachiremba wako kana wemishonga usati washandisa Flonase. Kubaya kana kuhotsira kunogona kuitika nekukurumidza mushure mekutungamira. Kana zviratidzo zvako zvikasavandudzika mushure memazuva manomwe ekushandisa Flonase, bvunza chiremba wako.
Nasal spray midziyo inoitirwa kushandiswa nemunhu mumwechete. Kugovana nasal spray mudziyo kunogona kukonzera hutachiona. Nasal sprays haifanire kumwaya mumaziso kana mukanwa.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve Afrin vs. Flonase
Chii chinonzi Afrin?
Afrin inopfuura-the-counter nasal spray decongestant. Iine oxymetazoline, inova alpha-adrenergic agonist iyo inokonzeresa vasoconstriction yemuno. Afrin iri kukurumidza-kuita, asi haifanire kushandiswa kweanopfuura mazuva matatu akateedzana.
Chii chinonzi Flonase?
Flonase inonzi corticosteroid nasal spray inowanika ese semushonga uye pamusoro peiyo-counter. Iine chinhu chinoshanda chefluticasone, iyo inoderedza kugadzirwa kwevanomiririra vamiririri munzira yemhino. Flonase inosvika pakuzara kwayo mushure memazuva akati wandei kana vhiki uye yakachengeteka kushandisa kwenguva refu.
Afrin naFlonase zvakafanana here?
Kunyange ese ari maviri Afrin naFlonase ari maviri mapfapfai emumhino ayo anoderedza zviratidzo zvekusangana mumhuno, iwo haana kufanana. Afrin ndeye vasoconstrictor yemuno inoganhurira kupinza kwemvura kune iyo nzira yemhino. Flonase iSteroid iyo inopindirana neyakaomarara mhinduro inounzwa neyakagwinya mhinduro.
Afrin kana Flonase zvirinani here?
Afrin inopa mhinduro nekukurumidza kune kuzara pamwe nekutanga kwechiito mukati memaminitsi gumi. Izvo hazvikurudzirwe kuti ushandise kwenguva yakareba kupfuura mazuva matatu, zvakadaro. Flonase inononoka kubvisa zviratidzo zvekusangana asi inogona kushandiswa zvakachengeteka kwenguva refu. Flonase inoshanda kurwisa zvimwe zviratidzo zvekurwisa muviri senge inomhanya mhino, kusemura, uye maziso anotsunya.
Ndinogona here kushandisa Afrin kana Flonase ndichiri nepamuviri?
Pakave nezviitiko zvakashata zvechibereko zvine chekuita neAfrin kushandiswa mune yekutanga trimester yepamuviri. Kunyangwe iko-kamwe-kushandiswa mune yekupedzisira nhumbu isina kuratidzwa sekukuvadza, Afrin haisiyo inosarudzika yemhino yekudzivirira mumimba. Flonase inogona kuve yakachengeteka kushandisa panguva yekuzvitakura, zvisinei mamwe anodzvinyirira kana steroid mapiritsi anogona kunge aine yakawanda yekuchengetedza data inowanikwa. Bvunza chiremba wako nezve sarudzo yemumhino yakasarudzika.
Ndinogona here kushandisa Afrin kana Flonase nedoro?
Afrin naFlonase vanogona kuchengetedzwa zvakachengeteka muvarwere vanonwa doro.
Afrin is steroid nasal spray?
Afrin haisi steroid. Iyo alpha-adrenergic agonist inoshanda nekukanganisa vasoconstriction mundima yemhino.
Flonase ndeye antihistamine kana decongestant?
Flonase haisi antihistamine kana yakananga decongestant. Izvo zvinobatsira kudzikamisa zviratidzo zvekuzara kwemhino nekudzora kupinda kwevanomiririra vamiririri vakaburitswa panguva yeanogadzirisa mhinduro.
Ndinofanira kutora rini Flonase mangwanani kana husiku?
Flonase inogona kuiswa mune imwe yenzira mbiri. Murwere anogona kupa imwe pfapfaidzo mumhino imwe neimwe mangwanani uye / kana manheru (kusvika kumana pfapfaidzo dzese mumaawa makumi maviri nemana), kana varwere vanogona kupa mapiritsi maviri mumhino imwe neimwe panguva imwe chete, mangwanani kana manheru.
Flonase vs. Nasonex: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Chii chinoitika kana iwe ukasanganisa Latuda nedoro?
rudzii rwechiremba rwekuona ed
Ipi muzana yevakuru mune iri anoiswa seakanyanya?
iwe unogona here kuve lactose isingashiviriri gare gare muhupenyu
chii chinonzi miralax uye chinoshanda sei
nei topamax ichiita kuti unete kudaro